Manchester United oo £444m ku dooneysa laacibka Paris Saint-Germain ee Neymar. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Manchester United oo £444m ku dooneysa laacibka Paris Saint-Germain ee Neymar.
Posted by: radio himilo January 13, 2018
Muqdisho – Manchester United ayaa lagu soo warramayaa in ay go’aansatay isku diyaarinta sidii ay kusoo xera galin laheyd laacibka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar oo ay ku dooneyso £444 milyan oo lacagta Ingiriiska ah.
Intii lagu guda jiray xagaagii soo xirmay, Neymar ayaa dhameystiray heshiis rokoor adduun ah oo uu gaga tagay Barcelona kuna aaday garoonka Parc Des Princes, laacibkan heerka caalami ee waddanka Brazil ayaa tan iyo markaa dhaliyey 20 gool 22 kulan oo uu u ciyaaray dhamaan tartamada.
Si-kastaba, war-baahinta ayaa shaki galineysa farxadda uu 25-jirkan ku heysto gudaha wadanka France, dhanka kale Real Madrid ayaa diyaar u ah in ay laaciban ku darto weerarkeeda 18 bilood ee soo aadan.
Hayeeshee, Kooxda La Liga ayaa tartan kala kulmi doonta naadiga Man United, kooxdan ka timaadda Premier League ayaa isku diyaarineysa in ay £444 Milyan weerar-yahankan ku keento Masraxa Riyada, sida ay warineyso Le 10 Sport.
Neymar heshiiska uu kula jiro kooxda Ligue 1-ka hogaamineysa ayaan dhici doonin inta laga gaarayo illa 2022-ka.
Previous: Arda Turan oo dib ugu laabtay dalka Turkiga kuna biiray kooxda Istanbul Basaksehir FK.
Next: Jasiiradda ugu yar dunida ee lagu noolyahay